China Nhọrọ ziri ezi na nke ezi uche dị na ya maka mpaghara 5 maka nnukwu ndị na-eguzogide ọgwụ na-emepụta ọgwụ na ndị na-ebu ya | Joysun
Nnukwu ogwe aka na-eguzogide ọgwụ
Dị ka aha ahụ na-egosi, ọ bụ nchekwa nchekwa nchekwa pụrụ iche dị elu dị elu ejiri mee ihe na gburugburu okpomọkụ. Oke elu okpomọkụ agwakọta chemical eriri ise mkpịsị aka uwe nkwụ na ndeksi mkpịsị aka eyi na-eguzogide akpụkpọ anụ imewe, ị nwere ike họrọ dị iche iche elu-okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves dị ka okpomọkụ dị iche nke aka kọntaktị. Ke ofụri ofụri, elu okpomọkụ eguzogide gloves na-eji na elu okpomọkụ, okpomọkụ radieshon ma ọ bụ na-emeghe ire ọkụ gburugburu. Iji gbochie mmerụ ahụ aka, anyị kwesịrị iji gloves na-eguzogide ọgwụ dị elu n'ụzọ ziri ezi ma kpachara anya maka ihe ọghọm ụlọ ọrụ.
A na-ekewa gloves na-eguzogide ọgwụ dị iche iche dị ka ụdị anọ dị ka ihe dị iche iche: asbestos akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, carbon fiber elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, aramid akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ na iko iko akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ. Dabere na arụmọrụ nke nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, ọ nwere ike kewaa ya: nkịtị elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves, ire ọkụ retardant elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves, antistatic elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves, ájá-free elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, ájá-free antistatic elu okpomọkụ eguzogide ọgwụ uwe aka, na mgbochi ịkpụ akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ. Shoulddị dị iche iche nke ogwe aka na-eguzogide ọgwụ dị elu kwesịrị ịhọrọ ọnụ dabere na gburugburu ebe a kapịrị ọnụ ma chọọ otu ụdị kwesịrị ekwesị, ka igwu egwu ya, mmetụta nchekwa dị mma.
A na-ejizi gloves na-eguzogide ọgwụ dị ugbu a n'ọtụtụ ebe ma jiri ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ọ bụrụla ngwaahịa nchekwa ọrụ dị oke mkpa na arụ ọrụ gburugburu ebe obibi dị elu, nke nwere ike belata ihe ọghọm nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma chebe nchekwa na ahụike nke ndị ọrụ na ndị enyi. A na-ejikarị ogwe aka na-eguzogide okpomọkụ dị elu na gburugburu ebe ọrụ dị elu dị ka ciment, seramiiki, aluminom, osisi ike, petrochemicals na ịgbado ọkụ eletrik.
Ebe ise na-esonụ dị mma maka uwe elu dị elu, nke nwere ike inyere gị aka inwe nghọta ka mma.
Nke mbụ: ụlọ ọrụ eletriki na ụlọ ọrụ kemịkal
Igwe eletrọniki na ụlọ ọrụ kemịkalụ kwesịrị ịhọrọ uwe mgbochi dị elu. Industrieslọ ọrụ abụọ a nwere njirimara nke ha. Ohaneze, akwa-eguzogide ọgwụ gloves na-achọrọ ka ha nwee ezigbo mgbochi static Njirimara. Ma ọ bụghị ya, ọkụ eletrik nwere ike ibute ngwaahịa ahụ n'ụzọ dị nfe ma nwedịrị ike ịgbawa. Anti-static na elu-okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves na-ejikarị ihe eji eme aramid. Ihe nkpuchi di elu bu 99% aramid na 1% conductive waya. Ọ nwere ezigbo mgbochi static Njirimara, na bụ magburu onwe na-eyi eguzogide na elu okpomọkụ na-eguzogide.
Typedị nke abụọ: ime ụlọ dị ọcha na ụlọ nyocha
Pslọ akwụkwọ na-enweghị ntụ na ụlọ nyocha kwesịrị ịhọrọ uwe elu na-enweghị ntụ na-enweghị ntụ. Akụkụ abụọ a chọrọ uwe aka na ịdị ọcha dị elu na ngbanwe, ya mere, uwe elu na-enweghị ntụ na-adịkarị mma. A na-eji akwa ma ọ bụ eriri aramid filament mee akwa akwa ahụ, ya mere akwa ahụ nwere ike igbochi ájá na ibe, ma nwee ike iguzogide ogo 180 dị elu, ogo 300 nke mgbanwe, na arụmọrụ dị mma.
Kinddị nke atọ: nkà mmụta banyere ígwè, ihe nkedo, ndị ọrụ n'ihu ọkụ ahụ
Ndị ọrụ na metallurgy, casting, na oven kwesịrị ịhọrọ aluminium foil na-eguzogide okpomọkụ. N'ihi na mpaghara ọrụ nke ụlọ ọrụ a nwere ọkụ ọkụ ọkụ siri ike, ihe ruru ogo 800-1000, mana ọ dịghị mkpa ịkpọtụrụ ihe ọkụ dị elu. Ya mere, ị nwere ike họrọ aluminom foil elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves nke nwere ike n'ụzọ dị irè na-egosipụta kwes radieshon. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè na-egosipụta 95% nke kwes radieshon na n'otu oge ahụ nwere ike idi 800 degrees nke elu okpomọkụ mmiri mmiri ikwommiri ntabi. Agaghị emebi emebi elu nke akwa mkpuchi na-eguzogide ọgwụ dị elu ma kpọọ ya ọkụ. Ngwakọta dị n'ime dị mkpụmkpụ. Ọ nwere ike igbochi ịbanye nke okpomọkụ, ma nwee ike inye onye ọrụ oge ịhapụ aka ya iji zere ọkụ ọkụ dị elu, nke na-echebe onye ọrụ ahụ n'ụzọ dị irè.
Nke anọ: ụlọ ọrụ iko
Lọ ọrụ iko ahụ kwesịrị ịhọrọ 300-500 ogo aramid akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ. N'ime ụlọ ọrụ a, nrụgide dị elu nke okpomọkụ dị elu nke na-eguzogide ọgwụ dị elu dị obere, na mgbanwe ya na mgbochi ịkpụ arụmọrụ dị oke elu. Ya mere, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iji aramid akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves. Aramid elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves bụghị naanị nwere ezigbo elu na-eguzogide okpomọkụ na mgbochi ịkpụ arụmọrụ, elu bụ nro, n'ime oyi akwa bụ ala, na mgbanwe nke uwe dịkwa mma.
Nke ise: ụlọ ọrụ fotovoltaic
Industrylọ ọrụ fotovoltaic kwesịrị ịhọrọ 500-ogo aramid akwa-eguzogide ọgwụ ma ọ bụ 650-ogo aramid gwakọtara elu-eguzogide ọgwụ. The ụlọ ọrụ nwere dịtụ elu chọrọ maka na-eyi ndị na-eguzogide ma na-adigide na-arụ ọrụ arụmọrụ nke elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves, na kọntaktị okpomọkụ bụ n'ozuzu banyere 500-650 degrees. Nhọrọ nke akwa aramid dị elu na-eguzogide ọgwụ dị na ya kachasị elu na-eguzogide okpomọkụ ma na-eyi nguzogide. Ihe nkpuchi mkpuchi ikpo oku, akwa oyi akwa na akwa akwa nwere ike ime ka ndu nke na-aga n’ihu ma nwekwuo ike ịrụ ọrụ. Aramid elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves bụkwa ndị a na-ejikarị gloves na-eguzogide ọgwụ dị elu na ụlọ ọrụ fotovoltaic, ma kwụsie ike na ha kwụsiri ike mgbe ha jesịrị ọtụtụ.
Ihe ndị dị n'elu bụ mpaghara ise dị na gloves na-eguzogide ọgwụ dị elu, a na-ewepụtakwa ụdị akwa mkpuchi na-eguzogide ọgwụ dị elu metụtara ụlọ ọrụ ọ bụla n'ụzọ zuru ezu. Naanị nhọrọ ziri ezi nke nnukwu ogwe aka na-eguzogide ọgwụ dị elu, yana iji ya eme ihe nwere ike ịrụ ọrụ ezigbo nchekwa. Nhọrọ a kapịrị ọnụ nke ogwe aka na-eguzogide ọgwụ dị elu kwesịkwara ịtụle ọnọdụ okpomọkụ na oge nke ịkpọtụrụ ya na ihe ndị dị elu dị elu, yabụ ndị a na-ahọrọ gloves na-eguzogide ọgwụ dị mma.